Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguMriganka
Singamalungu osapho ama-4 kunye nenja eneminyaka emi-5 ubudala. UyiLabrador kwaye unobubele kakhulu, njengathi. Igumbi ligumbi labucala elinesango eliqhelekileyo. Iindwendwe ziza kuhlala nathi kwaye zinokuzenza zikhululeke njengamakhaya. Ukuba uhamba nge-self drive, indawo yokupaka iyafumaneka. Le ndawo iphakathi nendawo kunye nesikhululo sikaloliwe kwi-15 min yokuhamba kunye ne-20 yeSikhululo seenqwelomoya. Ibhayisekile iyarentwa iyafumaneka xa uyicelile.
Ndingumntu othanda isithuthuthu kwaye ndingakhokela uhambo apha.
Iindwendwe ziya kuba negumbi elizimeleyo elinendawo yokuhlambela encanyathiselweyo. Yibhedi ephindwe kabini kwaye umatrasi owongezelelweyo uya kubonelelwa xa kukho undwendwe olongezelelweyo. Ubuninzi begumbi lokuhlala ngabantu abathathu. Kukho itafile yokufunda ekufuneka kusetyenzwe kuyo. I-24 * 7 i-WI-FI kunye ne-backup yamandla. Ngokubanzi kukho ukunqunyulwa kombane kule ndawo, kodwa sicela iindwendwe ukuba zinyamezele de senze esi sibonelelo sifumaneke kwakhona. Iindawo zokutshixa zikwabonelelwa apho iindwendwe zinokugcina izinto zazo ezixabisekileyo zitshixelwe nezitshixo. Ukutshaya kuvunyelwe kuphela kwindawo yokuhlambela. Kukwakho nebalcony apho iindwendwe zihleli kwaye zonwabele iti yazo yangokuhlwa.
Yindawo ezolileyo nenoxolo. Imi kumbindi wesixeko kodwa ingxolo yezitalato zedolophu ayiphazamisi ubungcwele bendawo yethu. Kukho ibala elikufutshane apho abantwana bazakonwaba khona.
Umbuki zindwendwe ngu- Mriganka
Ndiya kufumaneka ngalo naluphi na uhlobo loncedo olufunekayo. Abahambi abahamba bodwa, abafuna amava, ndine 'iqela elonwabisayo' lokuhlala nalo. Sikhenketha ezindulini namahlathi (Dooars region)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Siliguri